I-China BTA Deep Hole Drill ifektri kanye nabakhiqizi | Deshen
Sakha anhlobonhlobo olubanzi lwe-BTA tube eyodwa ne-ejector twin tube hole hole kusuka ku-Ø7.76mm kuye ku-mm500mm, futhi amakhudlwana njengamathuluzi wesicelo akhethekile.
Kusetshenziswa imishini yokushayela i-BTA emshinini ozinikele lapho i-coolant ifakwa khona ngekhanda lomfutho bese kuthi ama-chips akhishwe enkabeni yedrill kanye ne-drill tube. Ama-Tube dampers asetshenziselwa ukusekela i-drill tube futhi avimbele ukudlidliza nokuphambuka kwe-tube, futhi indawo yokusebenza isekela ingxenye yomsebenzi uma kudingeka.
Kusetshenziswa ama-Ejector drill emshinini ojwayelekile nowe-CNC. Basebenzisa inducer ukondla okupholile phakathi kwesistimu yangaphakathi nangaphandle yamashubhu ama-chips akhishwa enkabeni yethambo langaphakathi. Ngomshini we-CNC manje osebenzisa umfutho ophakeme weBotek opholile uyakwazi ukunikeza ezinye izindlela kuhlelo lwe-ejector.
Amakhanda okugxila okuqinile okufakwa ku-carbide fakiwe ayatholakala kusuka ku-Ø7.76mm kuya ku-Ø65mm. Lezi zinhloko zingahlanganiswa futhi ziphinde ziphindwe / ziphindwe zenziwe i-coated kepha zithathwa njengento engabizi ngakho-ke zinempilo enomkhawulo.
Izinhloko zokufakelwa ezifakiwe ezingatholakali zitholakala kusuka ku-Ø15mm kuya phezulu futhi zivumele izinguquko zokufaka okusheshayo nasemakhanda ngaphezulu kwe-Ø25mm amandla wokulungisa ubukhulu bokusika.
Amakhanda ahlukaniswa ngokufakwa okufinyelelekayo ayatholakala kusuka ku-Ø28.5mm kuya phezulu futhi avumela izimbobo ukuba zikhungatheke ngosayizi omkhulu ngemuva kokubanjiswa ngokuqinile. Njengoba besebenzisa amandla amancane kunamakhanda wokuqina okuqinile, ama-diameter amakhulu angakhiqizwa ngemishini enamandla amancane.
Amakhanda we-Trepanning ayatholakala kusuka ku-Ø55mm futhi akhiqiza ingaphakathi elingasetshenziswa futhi izindleko zokugcina impahla.
Esedlule: Isibhamu sokwenza imishini
Olandelayo: Umshini wokudonsa izibhamu we-Mirco hole